उम्मेदवार ईश्वर गुहार्दै ! - samayapost.com
उम्मेदवार ईश्वर गुहार्दै !
समयपोष्ट २०७४ मंसिर ११ गते ३:३६
इलामका उम्मेदवारलाई मतदातामात्रै दाहिना भएर पुग्दैन, ईश्वरले पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ। टिकट पाउन होस् या चुनाव जित्न, उनीहरू शीर्ष नेताको दैलो चहार्नुअघि लारुम्बाको शक्तिपीठ अघिल्तिर लाम लागिहाल्छन्। किरात धर्मगुरु आत्मानन्द लिङ्देनको आध्यात्मिक आँगनमा उनीहरूको भाग्य फैसला हुन्छ।
प्रदेशसभा उम्मेदवार खगेन्द्र देवान भन्छन्, ‘टिकट लिन जानुभन्दा अगाडि गुरुसँग आशीर्वाद लिन गएको थिएँ। उहाँले मेरो तिमीलाई आशीर्वाद छ, तिमीले जित्छौ भन्नुभएको छ।'
देवानको गुरुबखान त्यतिमा रोकिएन। उनले हौसिँदै थपे, ‘मेरो बारेमा माथि पनि केही कुराकानी भएको हुन सक्छ।' उनले त्यो ‘माथि' कहाँ हो भन्नेचाहिँ खुलाएनन्। धर्मगुरु आत्मानन्द बसेको स्थल लारुम्बामा शनिबार ‘आत्मानन्द गोल्डकप फुटबल' को दसौं संस्करणमा उनैलाई प्रमुख अतिथि बनाइयो।
आध्यात्मिक शक्तिकेन्द्र रिझाउन दुर्गम लारुम्बाको अक्करिलो बाटो धाउने देवान पहिलो र अन्तिम नेता भने होइनन्। उनीभन्दा चतुर निक्ले वाम गठबन्धनका प्रदेश उम्मेदवार धीरेन शर्मा रमण, जसले लारुम्बास्थित मांगेना सेवा विकास समिति अध्यक्ष केहेरसिंह योङहाङलाई नै समानुपातिकतर्फको टिकट थमाए।
उपराष्ट्रपति नन्दकिशोर पुनलाई गुरुको ६४ औं जन्मोत्सवमा प्रमुख अतिथि बनाउन सिधै बहादुरभवनमा फोन लगाए। आफूले नपुगेर क्षेत्र २ का प्रतिनिधिसभा वाम उम्मेदवार पूर्वसभामुख सुवास नेम्बाङको ‘पावर' चलाए।
सशस्त्र युद्धकालमा लारुम्बासँग तिक्त सम्बन्ध बेहोरेका यी माओवादी नेता आइतबार लारुम्बानजिकै चुलाचुली गाउँपालिकामा किरातधर्मीहरूले लगाउने सेतो चन्दनमा ठाँटिएका थिए। शर्माले भने, ‘म भेट्न जाँदा गुरुले भन्नुभयो- कहिलेकाहीँ पाप पहिले हुन्छ, त्यसपछि धर्म। यसपालि तपाईंहरूको राम्रो हुने देखेको छु। आजको अन्नपुर्ण पोष्टबाट